android ဖုန်းများအတွက် Typany Keyboard ကို APK ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » personalization Apps ကပ » Typany Keyboard ကို
Typany Keyboard ကို APK ကို
Typany Keyboard ကို - ပြည့်စုံစိတ်ကြိုက်အင်္ဂါရပ်နှင့်အတူတစ်ဦးကရိုးရိုးအစာရှောင်ခြင်း, ဖက်ရှင်ကီးဘုတ်!
အောက်ပါပျေါလှငျနှင့်အတူငါတို့သည်နောက်သံသယကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရိုက် personalize, ငါတို့ကီးဘုတ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးရှေးခယျြမှုအဖြစ် Typany ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
☆ DIY အဓိကအကြောင်းအရာ: အယ်လ်ဘမ်ထဲကနေဓာတ်ပုံတပုံကိုရွေးချယ်ပါ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကီးဘုတ်စိတ်ကြိုက်ဖို့အကြိုက်ဆုံးသော့ချက်စာလုံးအရောင် effect ကိုယူပါ။
☆ ရုပ်ပြောင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: သင့်ကိုယ်ပိုင်အီမိုဂျီ Create တို့နှင့်ကြီးသောပျော်စရာအတူတီထွင်ဖန်တီးမှုတိုက်ဖျက်မည်။
☆ AI အ Powered ဘီဘာအို & အော်တိုပြင်ဆင်ခြင်း: အဆင့်မြင့်ဆုံးမခြင်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူတစ်ဦးကအမှန်တကယ် typing error တစ်ခု-လူသတ်သမား။
☆ ကျွမ်းကျင်သူသင်ယူ: သငျသညျအမျိုးအစားအဖြစ်လေ့လာပါ။ ကိုယ်တိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘိဓါန်မှစကားများထည့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ယခုအခမဲ့ Keyboard ကို Typany ရန်သင့်ဖုန်းရဲ့ကီးဘုတ် Upgrade!Typany Keyboard ကိုသင်အလျင်မြန်ဆုံးနှင့်အများဆုံးစိတ်ကြိုက်မိုဘိုင်းစာရိုက်အတွေ့အကြုံကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
Typany ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်နည်းပညာနှင့်သင်၏စိတ်ကြိုက် chatting အတွေ့အကြုံကို Start နှင့်သီးသန့်ကီးဘုတ် themes များနှင့်ရုပ်ပြောင်ပန်းချီလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Typany သင်ယူ! လျင်မြန်စွာ
Fast ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း input ကိုခန့်မှန်းနည်းပညာ, Typany သင်ယူဒီဇိုင်းသောအခါကြှနျုပျတို့စိတျထဲတှငျရှိတယျ။ ဒီ feature နှင့်အတူ, သင်ရိုက်ထည့်စကားလုံးများနှင့်စာပိုဒ်တိုများသင့်ရဲ့စာရိုက်စူပါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်အောင်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ပစ္စည်းတွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာလုပ်ငန်းများ၌နှင့်ကိုအောက်မေ့လိမ့်မည်!
အခမဲ့မှန်မှန်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် Themes များနှင့်စတစ်ကာများ,!
တော့ဘူးမှားယွင်းတဲ့ဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤတွင် Typany မှာ, ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းအရာအားလုံးအခမဲ့ပါ! သငျသညျပိုနှစ်သက်ပါလျှင်သင်တို့သည်ငါတို့၏မှန်မှန် updated ဒေတာဘေ့စကနေကြိုက်သလောက်အဖြစ်အများအပြား themes များနှင့်စတစ်ကာများကို Download လုပ်ပါ, သို့မဟုတ်မမှာအားလုံး! ဒါဟာအားလုံးကိုသင်မှတက်ပဲ!
multi-ဘာသာစကားပံ့ပိုးမှု! ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှတိုင်းဖောက်သည်ထွက်ရောက်ရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်ခဲဆုံးစမ်းပါ။ သင်ရိုက်ထည့်အဖြစ်လက်ရှိထောက်ခံ 91 ဘာသာစကားများကျော်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ဒေါင်းလုတ်လုပ်ဘာသာစကားများအကြားချောမွေ့စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်
- Typany သင်ယူ: Typany သင်သည်နှစ်ကြိမ်ရိုက်ထည့်သောစကားတော်ကိုအောက်မေ့နိုင်သကဲ့သို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဘိဓာန် Build;
- အော်တိုအပြီးအစီးနဲ့ Word ဘီဘာအို: သငျသညျစာရိုက်နှငျ့သငျတိကျမှုနောက်စကားလုံးခန့်မှန်းကမ်းလှမ်းနေသောစကားများ auto-ဖြည့်စွက်;
- အော်တိုပြင်ဆင်ခြင်း: အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားဆုံးမခြင်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူသင်၏စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုကိုဆုံးမ;
- စာသားမဘန်: သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုမဆိုရွေးချယ်ထားသည့်စကားလုံးများကိုကူးယူသို့မဟုတ်ပယ်ဖျက်ဖို့ဖွကြောင်းရှည်လျားသောစာကြောင်းများတည်းဖြတ်ရန်တော်လှန်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
- ရုပ်ပြောင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို: သင့်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ပြောင်စိတ်ကြိုက်ဖို့အီမိုဂျီဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်လာသည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူပျော်စရာရှိသည်။
- စတိုင်ရွေးချယ်မှုတိုးချဲ့: မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကီးဘုတ် Customize သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သင်၏အရောင်ဒါမှမဟုတ်ဆောင်ပုဒ် store မှာမူလဒီဇိုင်း themes များကို select;
- အဆိုပါအများစုမှာ Compact ဖိုင်အရွယ်အစား: 10M ထက်လျော့နည်း။ Typany Keyboard ကိုလျော့နည်းအာကာသလိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုပိုမိုပြုကြလော့
- ရုပ်ပြောင်ဘီဘာအို: Typany သာအောက်မေ့စကားလုံးများကိုဒါပေမယ့်လည်း emojis အဖြစ်သင်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပြောင်အကြံပြု;
- အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက် Keyboard Layout: ထိုကဲ့သို့သော QWERTY, QWERTZ နှင့် AZERTY အဖြစ်သင့်စတိုင်, ကိုက်ညီတဲ့အဆင်အပြင်ကိုရွေးချယ်ပါ,
- multi-ဘာသာစကားပံ့ပိုး: လွတ်လပ်စွာ switched နိုင်သည့်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုငှေပါ။
90 + ဘာသာစကားများအပါအဝင်ထောက်ခံပါတယ်:
အင်္ဂလိပ်စကား (အမေရိကန်, ဗြိတိန်, AU)
စပိန် (ES, LA ကအမေရိကန်)
ပေါ်တူဂီ (PT, BR)
ကျနော်တို့စျေးကွက်အပေါ်ထွက်ရှိအကောင်းဆုံးကီးဘုတ်ဖန်တီးဖို့ကွိုးစားတဲ့သူထက်ပိုမို 40 အသည်းအသန်တစ်ဦးချင်းစီ၏အုပ်စုတစုရှိပါတယ်။
Facebook မှာ: http://www.facebook.com/typany/
ယခု beta ကို tester ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ G + အသိုင်းအဝိုင်း Join! https://goo.gl/h4Z0XK
Typany Keyboard ကို - အီမိုဂျီ, အဓိကအကြောင်းအရာ
14.11 ကို MB
Typany Keyboard ကိုရေးအဖွဲ့